Diyaarad Helicopter Ah Oo Dowladda Turkiga loogasoo Riday Wadanka Suuriya.
Sunday February 11, 2018 - 11:07:41 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Suuriya ayaa sheegaya in markale diyaarad dagaal lagusoo riday qeybo katirsan wadankaas oo dagaallo culus ay ka socdaan.
Dowladda Turkiga ayaa ku dhawaaqday in mid kamida diyaaradaheeda dagaalka lagusoo rogay gobolka Xalab ee waqooyiga Suuriya dhaca halkaas oo kumanaan katirsan melleteriga wadankaas ay dagaallo uga jiraan.
R/wasaaraha Xukuumadda Ankara Bin Cali Yaldariim ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in diyaarad nuuceedu yahay Helicopter loogasoo riday duleedka magaalada Cafriin halkaas oo ay kula dagaallamayaan maleeshiyaadka Kurdiyiinta PKK.
Laba askari oo katirsanaa melleteriga Turkiga oo diyaaradda la socday ayaa dhintay sida uu isna xaqiijiyay Rajeb Dayid Erdogaan madaxweynaha Turkiga oo warbaahinta lahadlay wuxuu sheegay in soo rididda diyaaradda aysan joojin doonin howlgalka loogu magac daray Laanta Zeytuunka ee xukuumadda Ankara bilaawday bishii lasoo dhaafat.
Afhayeen u hadlay maleeshiyaadka Kurdiyiinta ayaa isna sheegay in dagaalyahanadoodu ay diyaaradda la heleen gantaal xilli ay duqeyn ku heysay dad shacab ah wuxuuna ku hanjabay in ciidamada Turkiga iyagoo guul darreystay ay dib ugu celin doonaan halkii ay kasoo duullaan tageen.
Isbuucii lasoo dhaafay khasaarihii ugu xooganaa ayaa ciidamada Turkiga kasoo gaaray dagaalka Suuriya kadib markii 7 askari maalin qur ah laga dilay gaari gaashaammanna laga Burburiyay.